Mabhureki 1.1 chii chitsva mushure mekushandisa nguva? | Kubva kuLinux
Mabhureki 1.1 chii chitsva mushure mekushandisa nguva?
Unoyeuka here akaisa zvikomberedzo? MuKubvaLinux tinotsaurira akati wandei zvinyorwa kune ino chinyorwa mupepeti open source inokwidziridzwa neAdobe nenharaunda yayo, uye kuti kubvira ipapo yanga ichichinja zvishoma nezvishoma kusvika yasvika vhezheni 1.1 ine zvakawanda zvakagadziriswa uye maficha.Muchinyorwa chino tichaongorora mamwe acho, asi kutanga, ngatirangarirei dzimwe dzesarudzo dzinogadzira akaisa zvikomberedzo chimwe chinhu chakasiyana.
1 Kugadziridza pamhepo nemaBrackets
2 Wona zvinhu, mavara, uye mifananidzo mune Mabhureki
3 Yakakamura maonero muBrackets
4 Kuwedzeredzwa, kuwedzeredzwa kwakawanda mumabhureki
5 Mabhureki uye Bvisa
6 Mabhokisi mhedziso
Kugadziridza pamhepo nemaBrackets
Chimwe chezvinhu zvinonakidza zveMabhureki ndizvo zvandinodaidza kuti "Kugadziridza Pamhepo", iyo inosanganisira kugadzirisa CSS zvimiro zveHTML iripo, kana kugadzira imwe nyowani, kubva kufaira racho. .tml pasina kufanira kuvhura iyo faira remastaet. Isu tinongofanirwa kuisa iyo cursor pane inoenderana chitaridzi uye tinya Ctrl + E.
Wona zvinhu, mavara, uye mifananidzo mune Mabhureki
Mabhureki anotibvumidza isu kuona mifananidzo iyo yatinobatanidza mune yedu html kodhi kana ruvara rweimba mune iyo .css faira sekuonekwa mumufananidzo wapfuura. Mukuwedzera, iwe une sarudzo yekuona shanduko dzatiri kuchengetedza mune yedu html faira mu Google Chrome otomatiki, pasina kurodha pasi peji racho.
Idzi ndidzo dzaive zvimwe zvezvinhu zvinotonhorera zvakanyanya zveMabhureki kumashure ikako, asi zvitsva zviri kuuya izvozvi.
Yakakamura maonero muBrackets
Iye zvino tinogona kushanda zvakanyatsogadzikana nemafaira maviri panguva imwechete tichipatsanura mupepeti wekutarisa ese ari maviri uye akatenderera. Inosanganisira kutsigira maTimu nekutadza uye anotibvumidza isu kusarudza font yatinoshandisa uye saizi yayo.
Kuwedzeredzwa, kuwedzeredzwa kwakawanda mumabhureki
Kana paine chimwe chinhu umo mabhureki akavandudza zvakanyanya (nekuda kweCommunity) iri mune runyorwa rweanowanikwa ekuwedzera, mazhinji acho aine mhando yepamusoro.
Ini ndinoshandisa zvimwe zvinonakidza zvakadai se:
Natsa: Kunaka JS, CSS uye HTML kodhi
Bootstrap 3 Skeleton: Kugadzira Boostrap-yakagadzirira html.
Mabhureki Enzanisa: Chishandiso cheDIFF.
Task Rondedzero: Kuva nerunyorwa rwemabasa aripo
Git mabhureki: Imwe yezvangu zvandinoda, zvinonditendera kuti ndigadzirise chirongwa changu uye chayo cheGIT. Ini ndinosiya skrini mumufananidzo unotevera.
Vamwe, vamwe vazhinji ..
Mabhureki uye Bvisa
Neshanduro 1.1 yeMabhureki isu tine sarudzo yekurodha musiyano unosanganisira Bvisa, izvo chaizvo incluye una nueva experiencia de instalación inicial y una característica que le permite colaborar con un diseñador (que use .PSD) y que utilice la nube de Adobe. Ini handikwanisi kukuudza mashandiro ainoita zvikonzero zviri pachena, asi zvinoita senge yakanaka sarudzo.
Muchidimbu, ndinogona kutaura kuti munguva pfupi inotora kusimudzira, mabhureki ari kutora nzvimbo yakakosha kwandiri pakati pedzimwe nzira dzatava nadzo. Haina kukwana, ichine nzira refu yekuenda (uye ndinoshuva kuti dai ichimhanya nekukurumidza seSublime Chinyorwa), asi nekuda kwezvinhu zvitsva uye zvinowedzeredzwa zviri kuwedzerwa, inozoita sarudzo yakanaka kwazvo kune vashandisi. Mberi.
Ini ndinogona kuve nezvimwe zvinhu zvekutaura, asi chinhu chakanakisa ndechekuti iwe uzviedze uye utonge iwe pachako. Mabhureki anowanikwa kubva pawebhusaiti yavo nemapakeji akanyorwa kune Debian / Ubuntu, kana kwavanobva. Kana iwe uri ArchLinux mushandisi iwe unogona kuiisa iyo zvakananga kubva kuAUR.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » Mabhureki 1.1 chii chitsva mushure mekushandisa nguva?
Ndanga ndichishandisa brace kubvira vhezheni 0.27 uye ndakura zvakanyanya nguva yese iyi 🙂
Iri ibwe !! Titan!
Ndiri kungomirira Kuedzwa kweDebian 😀
Zvinoita here kuti ufambe nema vi / vim mapfupi?
Raphael Mardechai akadaro
Parizvino mupepeti wandinogadzira, sezvo ini ndaona iri yangu yakasarudzika imwe xD
Pindura kuna Rafael Mardojai
Icho chaicho chinoshamisa mupepeti, chakandifadza kubva pandakachiedza icho kekutanga. Ndino kurumbidza. Ndinovimba kuti munguva pfupi ndicha bvisa hegemony kubva ku SublimeText.
Ndinovimba Sublime Chinyorwa chinodzidza chinhu kana zviviri. Ane mazano anonakidza kwazvo.
Ivo vaviri vanofanira kudzidza ..
Ndanga ndichiishandisa uye kwaunodzvanya ma «Ctrl + E» makiyi, hapana chinoonekwa, inongondiudza kuti iyo faira haipo iyo kana ndichida kugadzira imwe.
Ndakaedza kuiisa muAntergos (yaourt -S mabhureki), asi zvinosuwisa kuti handife ndakapedza kumisikidza zvakanaka. Ini ndinogara ndichiwana inotevera kukanganisa:
"Kumhanya" curl-dir: node-linux64 "(curl-dir) basa
Mafaira «kurodha pasi / node-v0.10.24-linux-x64.tar.gz» yakagadzirwa.
Kumhanya "node-yakachena" basa
Kumhanya "node-mac" basa
Kumhanya «gadzira-chirongwa» basa
Kuvaka mafaera eprojekti
Donate, pasina zvikanganiso.
CXX (tarisa) kunze / Kuburitsa / obj.target / libcef_dll_wrapper / libcef_dll / transfer_util.o
gadzira: g ++: Chirongwa chacho hachina kuwanikwa
libcef_dll_wrapper.target.mk:212: Kukundikana kwemirayiridzo yechinangwa 'kunze / Kuburitsa / obj.target / libcef_dll_wrapper / libcef_dll / transfer_util.o'
gadzira: *** [kunze / Kuburitsa / obj.target / libcef_dll_wrapper / libcef_dll / transfer_util.o] Mhosva 127
==> Kanganiso: Kwakaitika tsaona mu kuvaka ().
==> Kanganiso: Makepkg haina kukwanisa kuumbiridza mabhureki.
==> Kutangazve kubatanidza bracket? [y / n]
Pane chero munhu anoziva kuti chingave chii kana kuti ndinga gadzirisa sei kuti ndishandise mabhureki?
Kana iwe ukaona kuti haugone, gadza kubva kune dhiri.
Ini kubva kuAUR ndinogara ndichiisa mabhureki-bin
Mabhureki-bin akashanda. Ndatenda!
Ndakaedza vapepeti vakasiyana siyana asi pakupedzisira ndinogara ndichiguma kudzoka kuna Kate. Kugadziridza iyo CSS pamhepo, kuongorora mifananidzo kana mavara anoshanda chaizvo uye anochengetedza nguva, asi iwe unofunga izvi zvikonzero zvakakwana zvekuenda pamusoro paKate, izvo zvinopedzisira zvabatanidza anenge ese mabasa anobatsira anoonekwa mune vamwe vapepeti, Kumabhuraketi? Ndinoziva kuti ini ndichawana mhinduro yakanakisa nekuyedza pachangu, asi chokwadi ndechekuti ini ndakabhoikana kuyedza ichi kana icho chirongwa uye pakupedzisira kupedzisira ndadzokera kune avo vanga vachindipa mhedzisiro yakanaka kwemakore.
Dambudziko rega randinoona naKATE nderekuti haina kodhi yekuzadzisa, zvinyorwa nezvimwewo 🙁
Zvinoita sekunge Autocomplete ine: http://kate-editor.org/about-kate/
Zvakanaka, zveHTML neCSS handisati ndambozviona.
Iye anopedzisa uyo asingaite izvo elav anokumbira. Izvo zvinongokupedzera chete kana paine izwi rinotanga zvakafanana mugwaro.
Pindura ku clow_eriol
Sarudzo yekutanga yandinodzvanya pa 'Dynamic Preview' inongowanikwa neGoogle Chrome…. -> Kubvisa….
Iko kune mania neGoogle Chrome? vanokanganwa kuti iyi Linux? Netflix, WhatsApp uye ikozvino mabhureki ...
Ehe iri. Izvo zvinoitika ndezvekuti sarudzo iyi inongobatsira chete kana ukashanda ne .html, inova yakanakira dhizaini, asi kana iwe ukagadzira iyo theme yeWordPress, paunenge uchishanda ne .php mafaera haisisina basa 😀
Mune ino yazvino vhezheni kune akawanda-browser bhureki yeiyo yekutarisa maonero, asi nekutadza yakaremara. Mune iyo faira rezvido iwe unoisa iyi "livedev.multibrowser": ichokwadi, ndinoishandisa ne firefox uye inoshanda.
Mhoro, uye unoiwedzera sei, nekuti ini ndinowedzera iyo kodhi uye pese pandinovhura chirongwa ini ndinowana mhosho iyo: iyo yekuda faira haina fomu yeJSON inoshanda.
Mhoroi, ndeupi dingindira rauri kushandisa? zvakanaka 🙂
Maitiro ekuita shanduko kubva kuMS Office kuenda kuLibreOffice nyore
EasyEDA pcb dhizaini mumaminetsi mashoma